Eran-tany | NewsMada
Par Taratra sur 06/04/2021
Hampitombo famatsiam-bola 650 miliara dolara hanarenana ny toekarena maneran-tany ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI). Ny firenena an-dalam-pandrosoana no tena itodihana, sahirana noho nykrizy ara-pahasalamana. Famatsiam-bola avo roa heny nataon’ny FMI taorian’ny krizy tamin’ny taona 2008. Nambaran’ny tale jeneralin’ny FMI, Rtoa Kristalina Georgieva, ny faran’ny volana marsa teo izany, rehefa nakan-kevitra momba ny fampitomboana ny famatsiam-bola ny filankevi-pitantanana. Manaiky ny fanohanana ireo firenena mpikambana ao amin’ny FMI.
Hitombo isa 100 tapitrisa olona ny ho latsaka anaty fahantrana lalina noho ny fisian’ny valanaretina Covid-19, araka ny tatitra navoakan’ny Banky iraisam-pirenena (BM). Tafahoatra tamin’ny tombana voalohany nataon’ny BM io tarehimarika navoaka io. 60 tapitrisa ny olona heverina ho latsaka anaty fahantrana tamin’izay tombana voalohany izay. Zava-dehibe ho an’ireo mpamatsy vola, noho izany, ny mampihena ny trosan’ny firenena mahantra, raha ny hevitry ny filohan’ny BM, i David Malpass. Hitombo hatrany ny isa navoaka farany amin’izao aretina miseho amin’ny endriny ankehitriny izao.
Nampitovy hevitra ny fanjakana any Côte d’Ivoire sy Ghana, nampihena 25 % ny vidin’ny kafe sy kakaô amin’ireo mpamboly. Nanambara izany tamin’ny fomba ôfisialy ny Filankevi-panjakana momba ny kafe sy ny kakaô (CCC) any Côte d’Ivoire, ny faran’ny volana teo. Noho ny aretina Covid-19, nampihena ny famatsiana sy ny vidim-bokatra miaraka amin’izany any Eoropa, ny nandraisan’ny CCC fanapahan-kevitra. 2,1 tapitrisa taonina ny kakaô avy any Côte d’Ivoire, nitombo 100 000 t. 40 % amin’ny vokatra eran-tany ny avy any Côte d’Ivoire.
Filoham-panjakana fito ao amin’ny Vondrona eoropeanina niara-nanao sonia hampiditra angovo nokleary ao amin’ny politika momba ny angovo sy fiatrehana ny toetr’andro. Ahitana angovo nokleary daholo any amin’ireo firenena (Frantsa, Hongrie, Pologne, Repoblika tchèque, Roumanie, Slovaquie, ary Slovénie) niara-nanao sonia ao amin’ny Komisionina eoropeanina ireo fa hitarina bebe kokoa izany hifanampian’izy ireo. Nambaran’ny teknisianina sasany any amin’ireo firenena ireo fa hampidina ny vidin’ny angovo izany sy tsy hampiova ny toetr’andro.
Ordre des pharmaciens; Docteur Tantely Rakotomalala : Strict contrôle des prix des médicaments» 20/04/2021
Fermeture des écoles: les établissements ré­cal­­citrants sanctionnés 20/04/2021
Dans le cosmos 20/04/2021
IFM : le concert de Silo annulé 20/04/2021
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur : une émission spéciale sur le monde de la littérature à Madagascar 20/04/2021